Isi > Onenote
ogidi in onenote
Ogidi na onenote - azịza nkịtị
Kedu otu m ga-esi wepu OneNote kpam kpam? Na mmalite menu, họrọ gia wheel Ntọala akara ngosi. Họrọ Sistemụ> Ngwa na atụmatụ. Họrọ Ngwaọrụ Ọmụmụ maka OneNote, wee họrọ Uninstall.
Onenote strikethrough shortcut - kedu otu anyi g’esi edozi ya
Kedụ ka m ga - esi wepu hyperlink? Iji wepu hyperlink mana debe ederede ahụ, pịa aka nri na pịa Wepụ Hyperlink. Iji wepu hyperlink kpamkpam, họrọ ya wee pịa Hichapụ.
Ọdịdị faịlụ onenote
Ọdịdị faịlụ Onenote - ihe ngwọta
Ebee ka akwụkwọ ndetu OneNote m gara? OneNote 2016 na-echekwa ihe ndetu gị niile site na akwụkwọ ndetu gị, nke ndabara na-echekwa na Documents folda ha na nchekwa ha. N'aka nke ọzọ, echekwara ha na Microsoft OneDrive. I nwekwara ike ịchekwa akwụkwọ ndetu na ebe ejikọtara na ntanetị gị, ma ọ bụ ebe ọ bụla ịchọrọ.
wepu ngwa obibi onenote
Wepu onenote ngwa nbipute - pragmatic ngwọta
Kedụ ka m ga esi edozi OneNote emerụla? 2. Na OneNote, gaa Faili -> Ama -> Mepee Ndabere, ma mepee nkwado ndabere kachasị ọhụrụ. Ọ bụrụ na faịlụ ahụ dị mma, ịnwere ike ịdọrọ ya n'ime akwụkwọ ndetu gị ma hichapụ faịlụ rụrụ arụ. I nwekwara ike iji OneNote Idozi Ngwaọrụ.
onenote enweghị ike imekọrịta
Onenote enweghị ike ịmekọrịta - otu esi ejikwa
Kedu otu m ga-esi chịkọta ederede na eserese na OneNote? Na ibe ọ bụla, dobe foto ndị ahụ n’ụzọ ịchọrọ ka ha pụta n’otu. De-họrọ foto niile site na ịpị n'akụkụ ọzọ na ibe. Jigide igodo logo Windows, wee pịa Mgbanwe + S iji malite obere mkpoko ihuenyo. Mgbe ihuenyo ahụ kwụsịrị, dọrọ otu nhọrọ na foto ịchọrọ ịhazi.
onenote ekwe ekwe
Onenote nkwụ a jụrụ - ajụjụ ndị mmadụ na-ajụkarị
Nwere ike OneNote chekwaa faịlụ na mpaghara? Nchekwa maka faịlụ ndetu site na iji OneNote App maka Windows 10 na-eme na OneDrive, nke bụ ọrụ nchekwa igwe ojii nke ọha na eze Microsoft. A na-echekwa faịlụ ndị a na mpaghara, nke na-enye ha ohere ịntanetị. A naghị akwado akwụkwọ ndetu echekwara naanị na draịvụ ike gị ma ọ bụ faịlụ faịlụ (a na-akpọ akwụkwọ ndekọ mpaghara).
onenote jikọtara mkpụrụ ndụ
Onenote jikota mkpụrụ ndụ - otu esi emeso
Kedu otu m ga-esi jikọta igbe dị na OneNote? Jikota ọdịnaya nke ihe ntanye jidere SHIFT. Pịa nkwaghari ahụ nke ihe edeturu nke mbụ, wee dọkpụrụ ya na mpempe akwụkwọ ndị ọzọ na ibe ahụ. Mgbe ọdịnaya ọdịnaya nke ihe edeturu jikọtara, hapụ igodo SHIFT.